ဘက်ထရီသိမ်းဆည်းဒစ်ဂျစ်တယ် clock တိုက်ရိုက် Wallpaper | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » တိုက်ရိုက်နောက်ခံများ » ဘက်ထရီသိမ်းဆည်းဒစ်ဂျစ်တယ် clock တိုက်ရိုက် Wallpaper
ဘက်ထရီသိမ်းဆည်းဒစ်ဂျစ်တယ် clock တိုက်ရိုက် Wallpaper APK ကို
သင့်ရဲ့ screen ကိုများစွာသောအခြားတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှနောက်ခံပုံများထက်ဖော်ရွေထက်ပိုဘက်ထရီသောအဆင်းလှသောဒစ်ဂျစ်တယ်နာရီနှင့်အတူဖြစ်လိမ့်မည်။
ဒါဟာသင်အချိန်သင့်ရဲ့ screen ပေါ်မှာအခါလူအပေါင်းတို့သည်အချိန်ကိုကြည့်ပါက,
ဝေါလ်ပေ၏အရည်အသွေးခန့်မှန်းရန် Lite ဗားရှင်းစမ်းကြည့်ပါ!
- အဖြူရောင် (ပုံမှန်)
- က Black
- ထို clockface ၏ဆုံးင့်လင်းမြင်သာ
- (အပြည့်အဝဗားရှင်း!) ပြောင်းပြန်လှန် clockface အရောင် option ကို
- Digital အရောင်ထိန်းချုပ်မှု (အပြည့်အဝဗားရှင်း!)
- ရက်သတ္တပတ်၏နေ့ Displaying
- 12 နာရီ (နံနက် / ညနေ) - (အပြည့်အဝဗားရှင်း!) 24 နာရီ switching
- ကအပေါ်ကို double click နှိပ်ပြီးခြင်းဖြင့် system ကိုနှိုးဆော်သံကိုဖွင့်ဖို့နှိုးစက်နာရီခလုတ်ကို!
(အပြည့်အဝဗားရှင်း!) ကို tick သို့မဟုတ်မသန်စွမ်း: - စက္ကန့်သည် Modes
- (အပြည့်အဝဗားရှင်း!) နေ့စွဲ
- လျင်မြန်စွာ settings ကို
- Wallpaper ဖုန်းများနှင့် tablet များ (ရှုခင်းနှင့်ပုံတူ orientation ကို) ထောကျပံ့
- နာရီများစွာ Redrawing အများဆုံး enabled စက္ကန့်နှင့်အတူတစ်စက္ကန့်တစ်ကြိမ် (စက္ကန့်ကို tick mode မှာ, ဤကိစ္စတွင်အတွက် FPS န့်သတ်ချက်မှသာအချိန်ကို update ၏တိကျမှန်ကန်မှုကိုမှအကျိုးသက်ရောက်) နှင့်တစ်မိနစ်လျှင်တစ်ကြိမ်ကိုပိတ်ထားရသည့်အခါ။
- OpenGL ES 2.0 လိုအပ်သော
အပြည့်အဝဗားရှင်းဝယ်ယူသည့်အခါဖော်ပြထားလုပ်ဆောင်ချက်များကို၏အချို့သာရရှိနိုင်ပါသည်။ လျှောက်လွှာအတွက်အခကြေးငွေဗားရှင်းကိုဒေါင်းလုဒ်နေဖြင့်အပြည့်အဝဗားရှင်းတိုးချဲ့နိုင်ပါသည်။ သင်၌-app purchase ယူပြီးတဲ့အခါမှာ, သင်သည်သင်၏ဖုန်းကိုပြောင်းလဲသွားတယ်သို့မဟုတ် data ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ပင်လျှင်, ဝယ်ယူလုပ်ဆောင်ချက်များကိုမှတသက်တာရယူသုံးစွဲပါ။
။ fixed အမှားများ
။ သင့်ကိုယ်ပိုင် clockfaces-plugins ကိုဖန်တီးဖြစ်နိုင်ခြေ Added
။ စကေးနှင့် positioning ကိုအတူ Fixed အမှားများ
။ "အဖြူရောင်ရိုးရှငျး" clockface Added
ဘက်ထရီသိမ်းဆည်းဒစ်ဂျစ်တယ် clock တိုက်ရိုက် Wallpaper
7.05 ကို MB
kit အင်နာလော့နာရီ ...
ကမ္ဘာ့ဖလားနာရီ Widget လေး
ခုနစျပါးအချိန် - ...
ဘက်ထရီအပြည့်အဝနှိုးစက် Lite ကို
မြေပုံ Lite ကိုတိုင်းတာ